News | BurmeseAsia | Page 40
စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေဆီ အရောက် သွားပြီး လိုအပ်တာ တွေ ကူညီလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော ခင်သဇင်ကတော့ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သွေး တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ အခုလိုကာလဆိုးကြီးမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲတွေနဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကို တက်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီမှုတွေ နဲ့ လှူဒါန်းကာ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက...
The reason behind the Pokémon factory case regarding child labor in Burma
There are child laborers all over Rangoon in all walks of life. Donors around the world are shouting ata12-year-old waiter atatea...
“တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး” စာမျက်နှာကို Facebook ကုမ္ပဏီက ဖြုတ်ချလိုက်ပြီ ----------------------- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ စစ်တပ်ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်သည့် “တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး” စာမျက်နှာကို Facebook ကုမ္ပဏီက ဖြုတ်ချလိုက်ပြီလို့ ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Facebook ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့အညီ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစာမျက်နှာဟာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ အန္တရာယ်ပြုနိုင်မှုတွေကို တားဆီးထားတဲ့...
နာဂစ်တုန်းက အခြေအနေအတိုင်း ဖြစ်လာပြီ၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး လာပို့တဲ့ လေယာဉ် ဆင်းခွင့်မရ
News Admin - February 2, 2021 0
နာဂစ်တုန်းက မြန်မာပြည်အတွက် အကူအညီပစ္စည်းတွေ သယ်လာတဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေ အဝင်မခံလို့ ပြန်လှည့်သွားရတဲ့ ပုံပြင် ခင်ဗျားတို့ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား. ခုကိုဗစ် ဖြစ်ချိန်မှာ အမေရှိနေချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ စင်္ကာပူနဲ့အပြိုင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ.. အိမ်နီးချင်းထိုင်းကိုကျော်ပြီး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးအရင် ထိုးခွင့်ရလို့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေတောင် လေးစားအားကျ ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံ.. ဒင်းတို့လက်ထဲရောက်တာ ၂...
၂၅ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို တောင်တွင်းကြီးကပေါက်သူ ထုတ်ယူသွား
၂၅ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို တောင်တွင်းကြီးကပေါက်သူ ထုတ်ယူသွား ရန်ကုန် မတ် ၁၆ . ၂၀၂၁ ယဉ်ပပထွန်း ( VOM) ၂၅ ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲကို တောင်တွင်းကြီးမြို့ပေါ်က ဆွတ်ခူးသွားတဲ့အတွက် ဒီနေ့လာရောက်ထုတ်ယူသွားတယ်လို့ အေင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက သိရပါတယ် ။ ထီပေါက်တဲ့ဆုငွေတွေကို ဒီနေ့မနက်ကစပြီးထုတ်ပေးနေတာပါ ။သိန်းတစ်သောင်းခွဲကို ဒီနေ့မနက်ကပဲ တောင်တွင်းကြီးက ပေါက်သွားလို့ ရုံးကိုလာရောက်ထုတ်ယူသွားပါပြီ၊...
News Admin - January 31, 2021 0
အမေရိကန်ရေတပ်က မဟာဗျူဟာမြောက် အရေးပါသောဒေသဖြစ်သည့် ပင်လယ်နက်ဒေသ၌ အင်အား တိုးချဲ့မှုအဖြစ် တတိယမြောက် စစ်သင်္ဘောတစ်စင်း စေလွှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဖျက်သင်္ဘော ယူအက်စ်အက်စ်ပေါ်တာက ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် ပုံမှန်ကင်းလှည့်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပင် လယ်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ဖျက်သင်္ဘော ယူအက်စ်အက်စ်ဒေါ်နယ်ကွတ်၊ ဆီဖြည့်ရေယာဉ် ယူအက်စ် အန်အက်စ် လာရာမီတို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်ရေတပ်က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်း ပြောသည်။ သုံးနှစ်အတွင်း...
မြန်မာနိုင်ငံကို R2P ဝင်တော့မှာလား ... ? R2P ၀င်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂလိုဘယ်အာတူးပီအဖွဲ့ ထည့်သွင်း =================================== မြန်မာနိုင်ငံကို R2P လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ် ပြုပေးသင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေ စာရင်းထဲ ဂလိုဘယ် R2P လို့ ခေါ်တဲ့ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး...
ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချတဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ တရုတ်ကြားဝင်ကန့်ကွက်မှုကြောင့် သဘောမတူနိုင်ခဲ့
News Admin - February 3, 2021 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ ပူးပေါင်းကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုတာကို တရုတ်ရဲ့ ကြားဝင်ကန့်ကွက်မှုကြောင့် သဘောမတူနိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းနဲ့အတူ နောက်ဆုံးသိရသမျှသတင်းများ တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှု ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချတဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ သဘောမတူနိုင်ခဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ ပူးပေါင်းကြေညာချက် ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုတာကို တရုတ်ရဲ့ ကြားဝင်ကန့်ကွက်မှုကြောင့်...
မြန်မာအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ထိုးပေးခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲအသစ်တွေ ဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ဘိုရှင်ဂတ် (Bosingak) ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဒီကနေ့မှာ ၁၂ ချက်တိတိ ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ပေါင်းစုထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ တစ်နှစ်တစ်ခါသာ တီးလေ့ရှိတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးထူးခြားခြား တီးပေးခဲ့တာအကြောင်း မစုမြတ်မွန်က ပြောပြပါမယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Seoul...
News Admin - April 2, 2021 0
သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကတော့ ပရဟိတသူရဲကောင်းအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံထားရသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲမှန်သမျှကိုလည်း လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်း ကူညီဖြေရှင်းပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော ပြည်သူတွေအတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဝေဠုကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် 2-4-2021 ယနေ့ လှူဒါန်းမှု လှိုင်သာယာ...